देशभरका सार्वजनिक यातायात चलाउन पाईने – Hamro24News
July 6, 2021 adminLeaveaComment on देशभरका सार्वजनिक यातायात चलाउन पाईने
नेपाल यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुर संगठनहरूले शुक्रबारदेखि देशभरका सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउने तयारी गरेका छन् ।उनीहरूले देशभरका मजदुर र व्यवसायीलाई सवारी चलाउनका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेका छन् । ‘भोली देखि देशभर चल्ने छोटो, मध्यम र लामो दूरीका सवारीसाधन चलाउने तयारी गरेका छौँ,’ नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले बताउनुभयो । स्वस्फूर्त सार्वजनिक सवारी चलाउने र कारबाही गरे पनि जेल जान तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
काठमाडौं- पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर २ हजार ३२८ जना व्यक्ति संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा १० हजार १३३ जनाको पिसिआर र एन्टीजेट परीक्षण गर्दा २ हजार ३२८ जनामासङ्क्रमण पुष्टि भएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार ५ हजार ८३७ जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा १ हजार ५२७ र ४ हजार २९६ जनाको एन्टीजेन परीक्षण गर्दा ८०१ जना संक्रमित पुष्टि भएका हुन्। पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर १९ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म ९ हजार १९८ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ।
२४ घण्टामा देशभर ३ हजार ६६ जना संक्रमित निको भएका छन्। नेपाल संक्रमित निको हुने दर ९४ दशमलब ३ प्रतिशत रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म ६ लाख ६ हजार ६६६ जना संक्रमित निको भइसकेका छन्।
४९ लाखमा कार किनेपछि प्रकाश सपूत भन्छन्– ‘कलाकार भएर पनि कार चढ्न सकिन्छ हैं’
नेपालतिर बढ्दै गरेको रेल्वेलाइनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको चासो?
फेरि लम्ब्याइयो निषेधाज्ञा, के गर्ने पाइने के नपाइने? [ पुरा बिबरण सहित]